မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: စိတ်သားဟင်းအတွက် ဆားချက်ခြင်း...
Posted by mabaydar at 7:02 PM
ဟား ဟား ဟား ရီလိုက်ရတာ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး .. ငါအော်ရီလွန်းလို့အမေဆူတာတောင်ခံလိုက်ရသေးတယ် . .မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးအဲလောက်ရီရလားတဲ့လေ. .ဟီးဟီး .. စိတ်ညစ်မနေနဲ့.. ပျော်ပျော်နေ. =)
ဟဲ့ ပလုတ်တုတ် !! စိတ်ထိန်း အုန်း။
12/17/2008 8:23 AM
စိတ်ညစ်ရင် ဟစ်ဟော့ပ်တွေ ဆိုပြီး ကကြမယ်။ :D
ဆားချက်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပို့စ်လေးကို ဖတ်သွား တယ်။ အိုကေ lah ကွန်မင့်လာရေးပါတယ်။ (အဟီး- ဘလောဂ့်ပိတ်မယ်လို့ အဟင့် အဟင့် လို့သာပြောလိုက် ကွန်မင့် များများရမယ်) (ဒါမှမဟုတ် အစ်မ kom မှာ နည်းကောင်း ရှိတယ်)
ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ...
ဘယ်လိုပို့စ်ပဲရေးရေး.. ဟာသတော့ မြောက်တယ်နော်...
ကောမန့်များ လာပါပြီ အမရေ တော်တော်ကို စိတ်ညစ်နေတယ်ထင်ပါ့ စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ မတွေးထားပါနဲ့လို့ အားလုံးကို ထုတ်ထားလိုက် ဒါဆို အမ စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့ဗျာ
stay happy. :):):)
12/22/2008 6:13 PM
More than need to worry is this coming month announcement. Right? really worry about 2009!
EDCS list make me really worry about us....
12/31/2008 7:30 PM